Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo Ilaalinta Macluumaadka | Citeia
Inicio/Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo Ilaalinta Xogta
SIYAASADDA SIRAHA IYO ILAALINTA MACLUUMAADKA
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ayaa daboolaya www.citeia.com
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee www.citeia.com wuxuu xakameynayaa helitaanka, isticmaalka iyo qaababka kale ee ka shaqeynta macluumaadka shaqsiyeed ee ay ku bixiyeen Isticmaalayaasha websaydhkan ama deegaan kasta oo ka mid ah deegaannada internetka.
Dhacdada taas www.citeia.com waxay kaa codsadeen inaad laxiriirto qaar kamid ah macluumaadkaaga shaqsiyeed waxaa sabab u ah baahida loo qabo in la ogaado si loo horumariyo xiriirka labada dhinac ay sii wadayaan mustaqbalka, iyo sidoo kale inaad awood u yeelato fulinta howlo kale oo la xiriira xiriirka sharci ee la sheegay.
Iyadoo loo marayo hirgelinta foomamka ku jira bogga, iyadoo la tixraacayo adeegyada ay bixiyaan www.citeia.com, isticmaalayaashu waxay aqbalaan ka mid noqoshada iyo daaweynta xogta ay ku bixiyaan ka shaqeynta xogta shaqsiyeed, kuwaas oo www.citeia.com waa mulkiilaha, isagoo awood u leh inuu adeegsado xuquuqda u dhiganta si waafaqsan qodobbada qodobadan soo socda.
www.citeia.com wuxuu u shaqeeyaa sida milkiilaha, fududeeyaha iyo maareeyaha waxyaabaha ku jira degelkan wuxuuna ku wargelinayaa dadka isticmaala inay u hoggaansameyso xeerarka ilaalinta xogta hadda jirta iyo, gaar ahaan, Xeerka (EU) 2016/679 ee Baarlamaanka Yurub iyo Golaha Abriil 27, 2016 oo ku saabsan ilaalinta dadka dabiiciga ah ee la xiriira ka shaqeynta xogta shakhsiga ah iyo wareegga lacag la'aanta ah ee xogta la sheegay, iyo baabi'inta Dardaaranka 95/46 / EC (wixii hadda ka dambeeya, Xeerka Guud ee Ilaalinta Xogta) iyo oo leh Sharciga 34/2002, ee Julaay 11, oo ku saabsan Adeegyada Bulshada Macluumaadka iyo Ganacsiga Elektaroonigga ah.
1. Ka shaqeynta xogta shakhsiga ah www.citeia.com
Iyadoo la raacayo qodobbada Xeerka Midowga Yurub 2016/679 ee Baarlamaanka Yurub iyo Golaha Abriil 27, 2016, ee ku saabsan ilaalinta dadka dabiiciga ah ee la xiriira ka shaqeynta xogta shakhsiga ah iyo wareegga lacag la’aan ee xogtan ( RGPD), waxaan kugu wargalineynaa in xogta aad na siiso adoo adeegsade ahaan u diiwaangashan loo maareyn doono:
Ka dhig astaanta adeegsadahaagu mid firfircoon barnaamijkeena, kuu oggolaanaya inaad la fal gasho oo aad isticmaasho aaladaha kala duwan ee aan kuu soo dhigno sidii isticmaale diiwaangashan. Profile-kaaga ayaa sii shaqeyn doona illaa iyo inta aadan ka noqonayn rukunka u dhigma.
Haddii aad iska diiwaangeliso mid ka mid ah boggeena si aad si toos ah u hesho wararka aan ku daabacno iyaga, cinwaanka emaylkaaga ayaa loo isticmaali doonaa inuu kuu soo diro warkaan.
Hadaad kaqaybqaadato adoo qoraya faallooyin, magacaaga isticmaale ayaa lasoo daabici doonaa. Annagu ma daabici doonno cinwaanka emaylkaaga xaalad kasta.
Xogta shaqsiyadeed ee isticmaaleha la ururiyey waxaa loola dhaqmi doonaa si qarsoodi ah oo qarsoodi ah.
2. Xog noocee ah ayaan aruurineynaa?
Iyadoo la raacayo qodobbada xeerarka hadda jira, www.citeia.com Kaliya waxay aruurisaa xogta si adag daruuriga u ah si loo bixiyo adeegyada laga soo helay waxqabadkeeda iyo manfacyada kale, habraacyada iyo howlaha uu sharcigu u nisbeeyay.
Isticmaalayaasha waxaa lagu wargelinayaa in macluumaadka aad ku bixiso foomamka ku jira degelkan uu yahay mid ikhtiyaari ah, in kasta oo diidmada bixinta macluumaadka la codsaday ay macnaheedu noqon karto suurtagal la'aanta helitaanka adeegyada u baahan.
3. Mudo intee le'eg ayaan xafidnaa macluumaadkaaga shaqsiga ah?
Xogta shakhsiga ah waa la hayn doonaa ilaa iyo inta isticmaaluhu uusan si kale u sheegin iyo inta lagu jiro muddooyinka sharci ahaanta lagu hayo, ilaa sababo macquul ah oo cad awgood ay lumiyeen waxtar ama ujeedo sharci ah oo loo soo uruuriyay.
4. Maxay yihiin xuquuqda isticmaaleyaasha na siiya xogtooda?
Isticmaalayaashu way jimicsi karaan, marka la eego xogta la soo ururiyey ee ku xusan qaabka lagu sharaxay qodobka koowaad, xuquuqda lagu aqoonsaday Xeerka Ilaalinta Xogta Guud, iyo xuquuqda gudbinta, helitaanka, sixitaanka, tirtirka iyo xaddidaadda daaweynta.
5. Ballanqaadka isticmaalaha
Isticmaaluhu wuxuu mas'uul ka yahay sax ahaanta xogta la bixiyay, taas oo ay tahay inay sax ahaato, mid socoto oo dhammaystiran ujeeddada la bixiyay. Si kastaba xaalku ha ahaadee, haddii xogta lagu bixiyay foomamka u dhigma ay ahayd milkiile koox saddexaad, isticmaalaha ayaa mas'uul ka ah qabashada saxda ah ee oggolaanshaha iyo macluumaadka dhinaca saddexaad ee dhinacyada ka muuqda Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
6. Mas'uuliyadda adeegsiga iyo waxa ku jira adeegsadayaasha
Soo galitaanka degelkeenna iyo adeegsiga laga yaabo in laga sameeyo macluumaadka iyo waxyaabaha ku jira degelkan, waxay mas'uul ka noqon doonaan qofka sameeyay. Sidaa darteed, isticmaalka laga sameyn karo macluumaadka, sawirrada, nuxurka iyo / ama alaabooyinka dib loo eegay laguna marin karo, waxay ku xirnaan doonaan sharciga, ha ahaadaan kuwo qaran ama kuwa caalami ah, kuwo khuseeya, iyo sidoo kale mabaadi'da wanaagga iimaanka iyo adeegsiga xalaasha ah. isticmaalayaasha, yaa mas'uul ka noqon doona marinkan iyo isticmaalka saxda ah
Sidaa darteed, isticmaalka laga yaabo in laga sameeyo macluumaadka, sawirrada, nuxurka iyo / ama alaabooyinka dib loo eegay laguna marin karo, waxay ku xirnaan doonaan sharciga, ha ahaadeen qaran ama caalami, mid khuseeya, iyo sidoo kale mabaadi'da wanaagga iimaanka iyo isticmaalka. xalaal ka ah dhinaca isticmaaleyaasha, kuwaas oo mas'uul ka noqon doona helitaanka noocaas ah iyo isticmaalka saxda ah. Isticmaalayaasha waxaa lagu qasbi doonaa inay si macquul ah u adeegsadaan adeegyada ama waxyaabaha ku jira, iyadoo la raacayo mabda'a iimaanka wanaagsan iyo ixtiraamka sharciga hadda jira, anshaxa, nidaamka guud, caadooyinka wanaagsan, xuquuqda dhinacyada saddexaad ama shirkadda lafteeda, waxaas oo dhan. iyadoo loo eegayo fursadaha iyo ujeedooyinka loogu talagalay.
7. Macluumaadka ku saabsan adeegsiga degellada kale iyo shabakadaha bulshada
www.citeia.com ayaa kaligeed mas'uul ka ah waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo maareynta boggaga internet-ka ee ay iyadu leedahay ama ay leedahay xuquuq la mid ah. Websaydh kale ama shabakad bulsheed ama kaydinta macluumaadka ee internetka, kana baxsan degelkan, waxaa mas'uul ka ah milkiilayaasheeda sharciga ah.
Amniga macluumaadkaaga shaqsiyeed waa noo muhiim. Markii aad ku qorto macluumaad xasaasi ah (sida macluumaadkaaga wareejinta bangigaaga ama cinwaanka emaylka) foomkeena diiwaangelinta, waxaan ku qarinaynaa macluumaadkaas adoo adeegsanaya SSL.
9. Xiriirinta bogagga kale
Haddii aad gujiso xiriiriyaha bogga saddexaad, waad ka tagi doontaa bartayada oo waxaad aadi doontaa bogga aad dooratay. Sababtoo ah ma xakamayn karno dhaqdhaqaaqyada dhinacyada saddexaad, ma aqbali karno mas'uuliyadda adeegsiga macluumaadkaaga shaqsiyeed ee la aqoonsan karo ee dhinacyadaas saddexaad, mana ballan qaadi karno inay u hoggaansamayaan isla dhaqannada asturnaanta ee annaga oo kale ah.
Waxaan kugula talineynaa inaad dib u eegto macluumaadka gaarka ah ee adeeg bixiye kale oo aad ka codsato adeegyada.
10. Isbedelada siyaasaddan asturnaanta
Haddii aan go'aansanno inaan beddelno Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, waxaan ku dhajin doonnaa isbadaladaas Nidaamkan Khaaska ah iyo meelaha kale ee aan u aragno inay ku habboon yihiin si aad uga feejignaato macluumaadka aan ururinno, sida aan u adeegsanno, iyo duruufaha jira, haddii ay jiraan, aan shaaca ka qaadno. taasi.
Waxaan xaq u leenahay inaan wax ka beddelno Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waqti kasta, markaa fadlan si joogto ah dib ugu eeg. Haddii aan wax ku beddeleyno siyaasaddan, waxaan kugu soo wargelin doonnaa halkan, emayl, ama ogeysiis ku saabsan boggaaga koontada.